Madaxweyne Gaas oo qaabilay wafti kasocda qaramada midoobey. – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo qaabilay wafti kasocda qaramada midoobey.
Nofeembar 22, 2016 1:11 b 0
Garoowe, Nov 22 2016-Madaxweynaha Dawllada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 22 November 2016 qasriga madaxtooyada ee magaalada Garoowe ku qaabilay wefti uu hogaaminayey madaxa xafiiska UNSOM Puntland Mr. Aaward Bell.
Mr. Aaward Bell iyo weftiga uu hogaaminayo ayaa Madaxweynaha Dawladda Puntland waxaa ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha doorashooyinka, abaaraha kajira Puntland iyo xaaladaha guud ee Soomaaliya.
Weftigan ka socday xafiiska UNSOM ee Puntland ayaa waxa ay ugu horayn Dawllada Puntland ku bogaadiyeen hanaanka geedisocod ee doorashooyinka heer federal ee Puntland ka socda, doorashooyinkaas oo puntland si habsami ah uga socda, waxayna sidoo kale tibaaxeen in beesha caalamka iyo Qaramada Midoobey ay sidhow ula socoto dedaalada dheeriga ah ee Dawladda Puntland ku bixisay sidii ay u hir geli lahayd hanaanka Dimuqraadiyada Soomaaliya.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawllada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa ugaga mahad celiyey Madaxda xafiiska UNSOM Mr. Aaward Bell kawarhaynta iyo lasocodka doorashooyinka ka socda Puntland, sidoo kalena ugaga warbixiyey doorashada aqalka hoose ee haatan ka socota Puntland halka ay marayso.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa weftiga ka socdey xafiiska UNSOM si qoto dheer uga xog bixiyey xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland welibana u sheegay in loo baahan yahay in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, isagoo tilmaamay in ay muhiim tahay in beesha caalamku ay ka qayb libaax ka qaataan kana qayb galaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu ku habsadeen.
DHEGEYSO-Khadiijo Cilmi Mataan oo baaq u dirtay Puntland iyo Galmudug.
DHEGEYSO-RW Cumar Cabdirashiid oo kahadlay musuq-maasuqa doorashada.